Mihalehibe ve ny kisary kursor rehefa mamindra azy haingana ianao? | Avy amin'ny mac aho
Ny rafitra fiasan'ny Mac dia nivoatra nandritra ny taona maro ary miaraka amin'ny fanavaozana farany, maro amin'ireo fitaovana sy fitaovana ary koa fitondran-tena amin'ny hetsika sasany no nafindra tany amin'ny macOS Sierra. Efa tao amin'ny kinova OS X El Capitan no nahitantsika ny fijanonan'ny fikarakaran'ireo rantsantanana telo tamin'ny fikandrana Izy io dia azo tantanana ao amin'ny tontonana System Preferensi ao amin'ny faritra Trackpad mba ho hita ao amin'ny faritra Accessibility.
Androany, na dia antsipirihany izay mety tsy tsapan'ny maro taminareo aza, holazainay aminareo ny fomba fanovana ny fitondran-tsoratry ny totozy totozy ary izany dia rehefa afindranao haingana amin'ny lafiny iray mankany amin'ny lafiny iray hafa izy, mampitombo ny habeny ny kisary kursor mba ho hitanao haingana hoe aiza izy.
Ny fihetsika resahintsika dia azo ovaina ihany koa Safidin'ny rafitra> Azo idirana> Seho. Ao amin'ny varavarankely misokatra Ho hitanao fa misy boaty fanamarinana izay ampandehanana ka ampandrenesina anao:
Ahintsano ny pointer totozy hahitana azy:
Afindrao haingana sy miverina ilay mpanondro totozy mba hampitombo ny habeny.
Raha nametraka ny kinova vaovao an'ny macOS Sierra Azo inoana fa nampavitrika ity safidy ity ianao ary imbetsaka dia nanontany tena ianao hoe ahoana no hamerenanao ilay kintana amin'ny fihetsika mahazatra. Ity fitomboan'ny habeny ity dia mifantoka amin'ireo olona manana olana amin'ny fahitana ary izany no antony nahitana azy tao anatin'ny faritra Accessibility.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » macOS Sierra » Mihalehibe ve ny kisary kursor rehefa mamindra azy haingana ianao?
Best Buy dia manambara ao amin'ny tranonkalany modely miafina an'ny iMac 27 "5K miaraka amin'ny processeur Intel Kaby Lake
Ahoana ny fomba famonoana ireo sosokevitra Siri ao amin'ny iOS 9